Stirling အင်ဂျင်များကိုမည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။ Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အင်ဂျင် >> Stirling အင်ဂျင်
ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်နက်နဲနဲလေ့လာသွားမည် stirling အင်ဂျင်, အဓိပ္ပါယ်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, stirling အင်ဂျင်အမျိုးအစားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် applications များဥပမာ။
ကျနော်တို့ရုံများအတွက်အင်ဂျင်အတွင်းအပိုင်းဖန်တီးခဲ့သည် stirling အင်ဂျင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များစာရင်းကဲ့သို့သောဤအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပါရှိသည် စက်ဒါကြောင့်ငါဘာလို့သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားရတာလဲဆိုတာရှင်းပြရတာအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်။
El stirling အင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်တစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ထရာ ရေနွေးငွေ့စက်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်နိုင်ရန်အပူအရင်းအမြစ်တစ်ခုသာလိုအပ်ပြီးရရှိသောအထွက်နှုန်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သီအိုရီအရ၎င်းသည် Carnot စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လက်တွေ့နှင့်အမြန်နှုန်းနိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်များရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတော်လေးနီးစပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Carnot စွမ်းဆောင်ရည်သည်အပူအင်ဂျင်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
Almería၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပလက်ဖောင်း မော်တာ၏ရွေ့လျားမှုကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်၊ ကိရိယာ၏ကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာများတည်ဆောက်ခြင်းသည်နေပူစွမ်းအင်ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတဲ့မင်းတို့အတွက်ရွေ့လျားမှု၏အရင်းအမြစ်အသစ် ဒါကြောင့်တစ် ဦး ရှိပါတယ်ပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည် su သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပါဝါ ကားများတွင်အသုံးပြုသောအခြားပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်များနှင့်မတူပါ။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုအများဆုံးစိတ် ၀ င်စားစေတဲ့အချက်ကတော့လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေးသောအပူနှင့်သာအလုပ်လုပ်သောမော်ဒယ်လ်ငယ်များကိုတွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီတစ်ခွက်။
ငါမင်းကို youtube ကနေဗီဒီယိုတချို့ချန်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ကလေးတွေထဲကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ရမလားဆိုတာစမ်းကြည့်တယ်။
အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့လင့်များစုစည်း stirling အင်ဂျင်။
ဝီကီပီးဒီးယားတွင်လည်ပတ်နေသောအင်ဂျင်။ ဝီကီပီးဒီးယားတွင်ထည့်သွင်းထားသည် Sitrling မော်တာငါ့အရသာအတွက်နည်းနည်းပျင်းရိ။ ဒါကိုအများကြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့။
Distal နှင့် Eurodish ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးဝင်သောစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အကြီးစားစီမံကိန်း stirling အင်ဂျင်.
နောက်ဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံကိန်း။ ပေါ်အခြေခံကာ stirling အင်ဂျင်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ခေတ်ကုန်သောနည်းပညာ။ အကြောင်းကိုအလွန်ကြော့ရှင်းပြချက် stirling အင်ဂျင်
Stirling အင်ဂျင်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လင့်များကိုကြီးစွာစုစည်းထားသည်။
Stirling EngineLinks ။ နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလင့်ခ်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်စပိန်ဘာသာတွင်မများပါ။
မော်တာ stirling မော်တာ
တဖြည်းဖြည်းနှင့်ဆောင်းပါးတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းနည်းနည်းချင်းစီတိုးပွားလာနေသည် stirling အင်ဂျင်.
ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ Stirling LTD အင်ဂျင်ကို makezine မှာအသေးစိတ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ် (link ဟာကျိုးပဲ့နေတယ်) ကံကောင်းချင်တော့ငါတို့ကအကြောင်းအရာကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်။ ဒီအင်ဂျင်က LTD ဖြစ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကသေးငယ်တဲ့အပူချိန်ကွာခြားမှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Stirling အင်ဂျင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်တစ်ခုရှိသည်။ သင်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာသို့ ၀ င်လိုလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏သမိုင်းကြောင်း၊ သူတို့အဘယ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ပုံ၊ သူတို့၏သံသရာများ၊
၎င်းသည်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးတွင်သင်အလွန်တိကျသေချာစေရန်လိုအပ်သောစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြန်ထုတ်ရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သတိထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်များသောလည်ပတ်မှုများစွာရရှိလိမ့်မည်။
အကြောင်းဘလော့ဂ်စတင်ပြီးနောက် stirling စက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သူ Jorge Rebolledo သည် youtube တွင်တွေ့ရသောဗွီဒီယိုတစ်ခုအားဖြင့်သူမှုတ်သွင်းထားသောစက်တစ်လုံးတည်ဆောက်ပုံကိုပေါက်ကွဲစေခဲ့သည်။
ဤတွင်ပထမ ဦး ဆုံးသွားသည်။
Stirling စက် Jorge Rebolledo မှ